Recruitment Advice ﻿
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဆောင်းပါးများ၊ tutorial များကို Jobsinyangon.com တွင်ဖတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးအလုပ်ကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကို လေ့လာပါ။
Netflix မှ Sony ရဲ့ အနာဂါတ်တွင်ထွက်ရှိမည့်ရုပ်ရှင်များအားလုံးကို တစ်ဦးတည်းမူပိုင် Streaming ထုတ်လွှင့်ပိုင်ခွင့်အားဝယ်ယူခဲ့
Semi-conductor များ မလုံလောက်မှုပြဿနာကြောင့် ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းတွင် အခက်အခဲများရှိလာနိုင်ကြောင်း Nintendo ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြီးအကဲမှသတိပေးခဲ့
သန်းပေါင်းများစွာသော Facebook အသုံးပြုသူများရဲ့ အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့် Facebook အား Ireland ဒေတာထိန်းသိမ်းရေးကော်မရှင်မှ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လျှက်ရှိ
Microsoft မှ Nuance ကို ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်လျှက်ရှိ
YouTube သို့ အသုံးပြုသူများမှ video များကို upload ပြုလုပ်ရာတွင် တရားမဝင်ရယူထားသော ဇာတ်ကားများနှင့် တေးသီချင်းများပါဝင်မလာစေရန် အစီအစဉ်များချမှတ်
Iranian man goes 60 years withoutabath
An Iranian man has broken the world record for the number of years spent without bathing.
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိက အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ ကျွန်တော်တို့ မိမိဘာလုပ်ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dream job ပါပဲ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့ အရေးပါတဲ့သက်ရောက်မှုကတော့ သင့်ရဲ့အဖြေဟာ သင့်ရဲ့ တတ်ကျွမ်းမှုအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ တန်ဖိုး အစရှိတာတွေကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့် နောက်ပိုင်းကာလများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ကို ပုံဖော်ပေးနိုင်မည့် အချက် (၈) ချက် (အပိုင်း - ၂)
by www.jobsinyangon.com |
၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့် နောက်ပိုင်းကာလများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ကို ပုံဖော်ပေးနိုင်မည့် အချက် (၈) ချက် (အပိုင်း - ၁)
လူသားအရင်းအမြစ်များကို နည်းဗျူဟာကျကျ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ အခြေခံသိကောင်းစရာများ (အပိုင်း -၂ )
လူသားအရင်းအမြစ်များကို နည်းဗျူဟာကျကျ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ အခြေခံသိကောင်းစရာများ (အပိုင်း - ၁)
Senior Sales Executive (Sal ...
AC Sales Manager (For Natio ...
Sales Engineer (Assistant M ...
Assistant Regional Sales Ma ...
Service Executive (After Sa ...
Operation & Maintenance ...
Fiber NOC Manager
Aquamarine Ecotourism Developm ...
Global Technology Co., Ltd (Gl ...
SUPER SEVEN STARS CO., LTD(85)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)(67)
IME International Co., Ltd(66)
PFE Company Limited(62)
BC Finance Ltd.(61)
Shwe Phon Co.,Ltd(54)
Apex Hospitality Group Co., Ltd(53)
Fair Deal Co., Ltd(52)
Telecom International Myanmar Co., Ltd(49)
Max Myanmar Construction Co.,Ltd.(49)
Cho Cho Co., Ltd.(49)
Trust Venture Partners Co., Ltd(48)
အခြားသော အလုပ်များကို ကြည့်ပါ။